कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा ! कस्तो होला यो जात्रा ? (फोटोफिचर) | Ratopati
personसुवास श्रेष्ठ exploreकाठमाडौं access_timeकात्तिक ४, २०७८ chat_bubble_outline0
काठमाडौँ महानगरपालिका–५ स्थित हाँडीगाउँमा बिहीबार जात्रा सम्पन्न भएको छ । ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ समेत भनिने यो जात्रा गत वर्ष कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण स्थगन गरिएको थियो । तर यसवर्ष भने स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै सम्पन्न गरिएको हो ।
नेपालीबीच चर्चित उखानै रहेको ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा ।’ आखिर होलाचाहिँ कस्तो ? धेरैलाई चासो हुनु स्वाभाविक हो । यो जात्राको आफ्नै विशिष्ट पहिचान र छुट्टै मौलिकता छ । प्रत्येक वर्ष कोजाग्रत पूर्णिमाको भोलिपल्ट लाग्ने यो जात्रामा बनाइएको रथको बनावट अन्य भन्दा फरक हुन्छ । हाँडीगाउँको जात्रामा अन्य जात्राभन्दा ठीक उल्टो गरी तल गजुर र माथि देवताको मूर्ति राखिन्छ । अन्य देवीदेवताको रथ तथा मन्दिर निर्माण गर्दा तल्लो भागमा ठूलो त्यसपछि सानो गर्दै निर्माण गरिन्छ र सर्वोच्च भागमा गजुर राखिन्छ ।
किम्वदन्ती अनुसार लिच्छवीकालबाट यो जात्रा चलेको जनविश्वास रहीआएको छ । जात्रामा सम्मिलित हुने महेश्वरको मूर्तिमा अंकित सम्वत् ८ सय ४९ ले यसलाई पुष्टि गरेको छ । यो जात्रामा ब्रम्ह, विष्णु र महेश्वरको पूजा गरिन्छ । यो जात्रा हेर्नाले तथा त्रिदेवको एक पटक दर्शन गर्नाले घरमा महालक्ष्मीको बास हुनका साथै मनोकामना सिद्ध हुने जनविश्वास रहि आएको छ ।
यो जात्रामा पाँच जनाले धिमेबाजा बजाउनुपर्ने र ३० जनाले रथ बोक्नुपर्ने प्रचलन पनि छ ।
एमाले बन्दसत्रमा जे देखियो तस्बिरमा हेर्नुहोस्